Alakamisy Janoary 6, 2022 Alakamisy Janoary 6, 2022 Amra Beganovic
Na dia maro aza ny olona mino fa ny marketing influencer dia natokana ho an'ny orinasa lehibe manana loharanon-karena be dia be, dia mety hahagaga ny mahafantatra fa matetika tsy mitaky tetibola izany. Marika maro no nisava lalana tamin'ny marketing influencer ho antony lehibe mahatonga ny fahombiazan'ny e-varotra, ary ny sasany dia nanao izany tamin'ny vidiny aotra. Ny influencers dia manana fahaiza-manao lehibe amin'ny fanatsarana ny marika, ny fahatokisana, ny fandrakofam-baovao amin'ny haino aman-jery, ny fanarahana ny media sosialy, ny fitsidihana tranokala ary ny varotra. Ny sasany amin'izy ireo izao dia ahitana
Aspire: Ny sehatra ara-barotra Influencer ho an'ny marika Shopify avo lenta
Alarobia, Desambra 29, 2021 Alarobia, Desambra 29, 2021 Douglas Karr
Raha toa ianao ka mazoto mamaky ny Martech Zone, fantatrao fa manana fihetseham-po mifangaro aho amin'ny marketing influencer. Ny fijeriko ny marketing amin'ny influencer dia tsy hoe tsy mandeha izany… fa mila ampiharina sy arahina tsara. Misy antony vitsivitsy mahatonga izany: Fitondran-tena amin'ny fividianana - Mety hanorina fahatsiarovan-tena amin'ny marika ny influencers, saingy tsy voatery handresen-dahatra ny mpitsidika tena hanao fividianana. Toe-javatra sarotra izany… izay mety tsy ho tambin'ny onitra araka ny tokony ho izy ny mpitaona
Shoutcart: Fomba Tsotra hividianana Hiaka avy amin'ireo Mpanentana amin'ny Media Sosialy
Talata, Desambra 28, 2021 Talata, Desambra 28, 2021 Douglas Karr
Mitombo haingana haingana ny fantsona nomerika, fanamby ho an'ny mpivarotra na aiza na aiza rehefa manapa-kevitra izay hampiroboroboana sy ny toerana hampiroboroboana ny vokatra sy ny serivisiny amin'ny Internet. Rehefa mikasa ny hanatratra mpihaino vaovao ianao dia misy fantsona nomerika nentim-paharazana toy ny famoahana indostrialy sy valin'ny fikarohana… saingy misy ihany koa ny mpitaona. Ny marketing influencer dia mitombo hatrany amin'ny lazany satria ny influencers dia nitombo tamim-pitandremana sy nikarakara ny mpihaino sy ny mpanaraka azy rehefa mandeha ny fotoana. Ny mpihaino azy ireo dia manana